माघेसङ्क्रान्ति : चाकु व्यवसायीलाई भ्याइनभ्याइ - Dainik Headlines
Home / Business / माघेसङ्क्रान्ति : चाकु व्यवसायीलाई भ्याइनभ्याइ
माघेसङ्क्रान्ति : चाकु व्यवसायीलाई भ्याइनभ्याइ
Dainik Headlines January 14, 2019	Business
बनेपा । काभ्रेपलाञ्चोक पाँचखाल नगरपालिका– ४ लामीडाँडाका चाकु व्यापारीलाई हिजोआज चाकु बनाउन भ्याइनभ्याइ भएको छ।
माघेसङ्क्रान्ति नजिकिँदै गर्दा बजारमा यसको माग बढी हुने भएकाले यतिखेर चाकु व्यवसायी निकै ब्यस्त रहेको देखिन्छ । विगत १५ वर्षदेखि सो व्यवसाय गर्दै आएका पाँचखाल नगरपालिका–४ लामीडाँडाका विष्णुपुकार श्रेष्ठले दैनिक १०० किलोदेखि १५० किलोसम्म चाकु बिक्री भइरहेको बताउनुभयो ।
“दिनको यति नै व्यापार हुन्छ भन्ने त हुँदैन तर पनि कामदारको ज्याला कटाएर दुई हजारदेखि रु दुई हजार ५०० सम्म कमाइ हुन्छ”, श्रेष्ठले भन्नुभयो, “चाकु बनाउनलाई दिनको ५० किलोको दुई÷तीन बोरासम्म सख्खर खपत हुन्छ ।”
त्यसका लागि आवश्यकपर्ने कच्चपदार्थ (सख्खर) कृष्णनगरबाट ल्याउने गरेको र एक पटकमा ५०÷६० बोरासम्म ल्याउने गरेको उहाँले बताउनुभयो । खासै पुस र मागमा बिक्री हुने गरेको चाकु बनाउने काम एक÷दुई महीनासम्म चल्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । काम गर्नेलाई दैनिक रु सात सयका दरले ज्याला दिने गरेको छ । आफ्नो पसलमा चार जनाले काम गरिरहेको श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
अरनिको राजमार्गको छेउमा पसल गरेर चाकु व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आउनुभएका श्रेष्ठले बाहिर सडक छेउमा नै यात्रा गर्ने यात्रुलाई बिक्री गर्दै आउनुभएको छ । त्यस्तै चाकु खरिद गर्न सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछापको मन्थलीसम्मका व्यापारी पसलमा आउने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
अर्का नजिकैको चाकु पसलमा काम गर्दै आउनुभएका श्याम तामाङले सानाठूला गरी दैनिक चार हजार पिससम्म बिक्री हुँदै आएको बताउनुभयो । “किलोको हिसाबमा भन्दा पनि हामीले सख्खरलाई घोलेर साना र ठूला साइजमा चाकु बनाएर प्याकिङ गर्ने हो, त्यसरी बनाएका चाकु दैनिक चार हजार पिससम्म बिक्री हुन्छ”, ताामाङले भन्नुभयो, “बजारमा मागअनुसार पु¥याउन यतिखेर हम्मेहम्मे हुन्छ ।” उहाँका अनुसार यहाँ उत्पादन हुने चाकु काभ्रेपलाञ्चोकलगायत सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप र काठमाडौँका विभिन्न बजारमा बिक्री हुने गरेको छ।
पाँच÷छ वर्ष अगाडिदेखि काम गर्दै आउनुभएका तामाङले दैनिक रु एक हजार १०० पाउने गरेको बताउनुभयो । सो पसलमा काम गर्ने अरु पाँच जना कामदारले भने कामअनुसारको दैनिक रु ७०० देखि ८०० सम्म ज्याला पाउने गरेको बताउनुभयो। कामदारले दाउरा चिर्ने, घोल्ने, तयार पारिएको चाकुमा पौष्टिक तत्व मिसाएर प्याकिङ गर्ने र बजारमा बिक्री गर्नेलगायतका काम गर्नुपर्छ।
पुस–माघको जाडो मौसममा शरीरलाई न्यानो राख्ने र शरीरलाई आवश्यकपर्ने पौष्टिक तत्व प्राप्त हुने भएकाले मानिसले चाकु सेवन गर्ने गर्दछन्।
Previous नेपालमै यस्तो मन्दिर छ जहाँ तुरुन्तै जोडी मिलाउने देखी जे माग्यो त्यही सम्म प्राप्त हुन्छ ! तपाई पनि दर्शन गरी भेटि सरूप १ शेयर गर्नुहोस !
Next एक पटक नुहाउँदा ६ बोत्तल स्याम्पु ! संसारकै लामो कपाल भएकी महिला
आज सोमबार बढ्यो सुनको मूल्य, हेर्नुहोस् बजारभाउ
माघे संक्रान्तिमा भुलेर पनि नगर्नुहोस् यी गल्ति, नत्र ! आउन सक्छ खराब समय (शेयर गरौ)
पोखराको गुप्तेश्वर गुफाबाट साढे ४ करोड आम्दानी
प्रेम जीवनको लक्ष्य हो भने त प्रेम र सहजीवन भइसकेपछि जीवनको लक्ष्य सकिनुपर्ने नि ? त्यसैले जीवनको अंश मात्र हो प्रेम ।
आज बीहिबार जेष्ठ २३ गते धरानको बुडा सुब्बा मन्दिरलाई एक सेयर गर्दै भेटी चढाएर राशिफल पढ्नुहोस्, तपाईंको दिन सिद्ध रहनेछ।
अर्घाखाँचीको ढाकावाङका शिशिर खनाल काठमाडौँबाट चार दिनदेखि बेपत्ता
एक पटक नुहाउँदा ६ बोत्तल स्याम्पु ! संसारकै लामो कपाल भएकी महिला
नेपालमै यस्तो मन्दिर छ जहाँ तुरुन्तै जोडी मिलाउने देखी जे माग्यो त्यही सम्म प्राप्त हुन्छ ! तपाई पनि दर्शन गरी भेटि सरूप १ शेयर गर्नुहोस !
एउटा यस्तो मन्दिर जहाँ मनले चाहेको पूरा हुनेगर्छ बिश्वास नलागे दर्शन गरि एक सेयर गर्नुहोस,
छिटो-छिटो पिसाब लाग्ने समस्या छ ? यसरी घरमै उपचार गर्नुहोस्
शिव भगवानले यहाँ काट्नुभएको थियो गणेशजीको शिर::पूरा थाहा पाउनु होस ।